warkii.com » “Sannadkii Hore Ayuu Doonayey Inuu Iska Tago, Mana Ogi Haddii Uu Cadhaysan Yahay” – Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Ka Hadlay Xaaladda Gareth Bale
“Sannadkii Hore Ayuu Doonayey Inuu Iska Tago, Mana Ogi Haddii Uu Cadhaysan Yahay” – Xiddig Ka Tirsan Real Madrid Oo Ka Hadlay Xaaladda Gareth Bale
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Toni Kroos ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee uu ku jiro laacibka ay isku kooxda yihiin ee Gareth Bale oo falal aanay jeclaysan ciyaartoyda iyo tababareyaashuba ku kacayay kulamadii ugu dambeeyey xili ciyaareedka ee kooxdiisa.
Kroos waxa uu sheegay in Gareth Bale uu xagaagii hore doonayay inuu iskaga tago kooxda, isla markaana ay kooxdu aqbashaday hase yeeshee markii dambe ay si kale wax u dhaceen.
“Ma jiro wax ka joojin kara dhamaan dhinacyada inay gaadhaan xal lagu wada qanacsan yahay. Hubaashii muu doonayn inuu ciyaaro daqiiqad ka mid ah kuwa uu hadda ciyaarayay. Waxauu doonayay inuu iska tago xagaagii hore, kooxduna way aqbashay markii hore, laakiin markii dambe waxba may hirgelin. Ma hubo haddii uu wali xoogaa cadhaysan yahay sababtaas darteed, waa xaalad adag.” Ayuu yidhi Toni Kroos.
Maaha wax caadi ah in ciyaartoyda kooxuhu ay ka hadlaan xaaladda ciyaartoyda kooxdooda oo ay caddeeyaan rabitaanka bixistooda amaba qorsheyaal fashilmay oo gudaha kooxda ah, laakiin Kroos wuxuu marar badan ku dhiirradaa arrin noocan oo kale, wax lala yaabana maaha.
Kroos oo sharraxaya sababta aanay wax weyn u ahayn inuu ka hadlo arrimaha ciyaartoyda doonaya inay baxaan, waxa uu yidhi: “Dhab ahaantii maaha wax weyn sida ay u muuqato, wax kastaana way wanaagsan yihiin kooxda dhaxdeeda. Waxaan aqaanay Bale lix sannadood ka hor, waxaananu ku wada guuleysanay waxyaabo aad u waaweyn.”
Real Madrid waxay isku dayi doontaa inay iibiso Bale xagaagan, laakiin xiddiga reer Wales ayaa doonaya inuu sii joogo Santiago Bernabeu illaa inta uu heshiiskiisu ka dhamaanayo laba sannadood kaddib, sida uu shaaciyey wakiilkiisa, Jonathan Bernett.